မအေးသောင်း နဲ့ သူ့ဘဲ ပတ်သတ် တဲ့ သတင်းတွေ ကို ဖော်ကောင် လုပ်လိုက်ပြန် တဲ့ “ဟန်ငြိမ်းဦး” – Let Pan Daily
မအေးသောင်း နဲ့ သူ့ဘဲ ပတ်သတ် တဲ့ သတင်းတွေ ကို ဖော်ကောင် လုပ်လိုက်ပြန် တဲ့ “ဟန်ငြိမ်းဦး”
ဟန်ငြိမ်းဦး ကတော့ ယနေ့ မှာ လူငယ် ပရိသတ် တွေ ဝန်းရံခြင်းခံရတဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ အကြောင်းေ တွ ဖွင့်ချလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။မအေးသောင်း က ဆို့အောက်နေ တာကြာပါပြီ အကောင့်မှာတခါ တင်ပေးဘူးပါတယ်။မအေးသောင်းနဲ့Remax myanarပိုင်ရှင် m zaw lattကအတွဲတွေဆိုတာ…အဲဒီထက်ပိုပီး သေချာတာက မန္တလေး ရောက်တိုင်း အမြဲတည်းနေကြ Hotel Sakura Princess မှာ တခန်းထဲ အတူတူ တည်းသွားတာပဲ။အခန်းငှားပီးအိပ်တာလည်း မဟုတ်ပဲ တညလုံး ဆော့ကစားနေပီးဆိုတဲ့ စာသားနဲ့အတူ အဆိုပါပုံများကို ချပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။
မအေးသောင်းကလည်း ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ချစ်သူ ရဲ့ မွေးနေ့ အတွက် စုံတွဲပုံလေး တရားဝ င်ချပြရင်း မွေးနေ့ ဆုမွန် တောင်းပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ မမသောင်းတစ်ယောက် ယခုလို တရားဝင် ချပြလာတော့ မကြာခင် လက်ထပ်တော့မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်နော်။
အခုလိုအဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့ Page မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာ လည်း အခုလိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများ ကိုအချိန်နှင့် တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်….
မအေးသောငျး နဲ့ သူ့ဘဲ ပတျသတျ တဲ့ သတငျးတှေ ကို ဖျောကောငျ လုပျလိုကျပွနျ တဲ့ “ဟနျငွိမျးဦး”
ဟနျငွိမျးဦး ကတော့ ယနေ့ မှာ လူငယျ ပရိသတျ တှေ ဝနျးရံခွငျးခံရတဲ့ မအေးသောငျးရဲ့ အကွောငျးေ တှ ဖှငျ့ခလြာတာပဲဖွဈပါတယျနျော။မအေးသောငျး က ဆို့အောကျနေ တာကွာပါပွီ အကောငျ့မှာတခါ တငျပေးဘူးပါတယျ။မအေးသောငျးနဲ့Remax myanarပိုငျရှငျ m zaw lattကအတှဲတှဆေိုတာ…အဲဒီထကျပိုပီး သခြောတာက မန်တလေး ရောကျတိုငျး အမွဲတညျးနကွေ Hotel Sakura Princess မှာ တခနျးထဲ အတူတူ တညျးသှားတာပဲ။အခနျးငှားပီးအိပျတာလညျး မဟုတျပဲ တညလုံး ဆော့ကစားနပေီးဆိုတဲ့ စာသားနဲ့အတူ အဆိုပါပုံမြားကို ခပြွလာခဲ့ပါတယျနျော။
မအေးသောငျးကလညျး ယနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ ခဈြသူ ရဲ့ မှေးနေ့ အတှကျ စုံတှဲပုံလေး တရားဝ ငျခပြွရငျး မှေးနေ့ ဆုမှနျ တောငျးပေး လာတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော။ မမသောငျးတဈယောကျ ယခုလို တရားဝငျ ခပြွလာတော့ မကွာခငျ လကျထပျတော့မယျလို့ ယူဆရပါတယျနျော။
အခုလိုအဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျ ကြှနျတျော တို့ Page မှ အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…နောကျမြားမှာ လညျး အခုလိုဆယျလီတို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပသတငျးမြား ကိုအခြိနျနှငျ့ တပွေးညီတငျဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေးသှားကွပါအုံးနျော….
မိလှနျးတဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ရငျခုနျသံမွနျစတေဲ့ ဆကျဆီ မျောဒယျ မရမျဆိုငျးနူး